कृष्णदास गिरी उर्फ 'सिद्धबाबा' किन एक्कासी गायब भए ? | Citizen Post News
कृष्णदास गिरी उर्फ 'सिद्धबाबा' किन एक्कासी गायब भए ?
२०७६ माघ १० गते ०९:३१
विराटनगर । आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका कृष्णदास गिरी उर्फ 'सिद्धबाबा' सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई नै झुक्याएर फरार भएपछि प्रहरीमाथि अर्को समस्या थपिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुनवाई चलिरहेका बेला उनी भने आफ्नो सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई नेपाल-भारत सीमाबाट फिर्ता पठाएर भारततर्फ लागेको बताइएको छ ।
बलात्कारको आरोपित गिरी बिहिबार दिउँसो विराटनगरको जोगबनी नाका हुँदै केही आफ्ना समर्थक र अनुयायीहरुसँग भारतर्फ लागेको थिए । यद्यपि उनीहरु आफ्ना समर्थक र अनुयायीका साथ सुनसरीको चतारास्थित आश्रमबाट बिहान उच्च अदालत जान हिँडेका थिए ।
किन उनी एकाएक खबर नगरी भारततर्फ लागे भन्ने विषयमा एकिन कुनै जवाफ नभएता पनि उच्च अदालत विराटनगरले उनको विपक्षमा फैसला दिन लागेको सुराक मिलेर उनी फरार भएको हुनसक्ने आकलन पनि गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्याललय मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी लोकदर्शन थापाले उनी फरार नभएको पनि सक्ने बताए । गिरी स्वास्थ्य उपचारका लागि भारततर्फ गएको पनि हुनसक्ने अनुमान लगाए । उद्यपि उनले सिद्धबाबाको खोजतलास सुरु भएको जानकारी दिए ।
प्रहरीले उनको सुरक्षाका लागि प्रहरी हवल्दार मुकेश साहलाई खटाइको थियो । उता उच्च अदालत विराटनगरले भने जिल्ला अदालतको फैसलाई उल्टाउँदै उनलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो ।